विद्यार्थीका लागि ‘मेरो डिजिटल नेपाल, मेरो परिकल्पना’ प्रतियोगिता सुरु, उत्कृष्टलाई रु. १ लाखसम्मको पुरस्कार Bizshala -
विद्यार्थीका लागि ‘मेरो डिजिटल नेपाल, मेरो परिकल्पना’ प्रतियोगिता सुरु, उत्कृष्टलाई रु. १ लाखसम्मको पुरस्कार
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीका कारण अहिले अधिकांश विद्यार्थी घरबाटै अध्ययन गरिरहेका छन्। डिजिटल प्रविधिको विस्तारले वैकल्पिक सिकाइको क्रम पनि बढ्दो छ।
यसैबीच कक्षा १२ वा १९ वर्षसम्मका विद्यार्थीका लागि लक्षित ‘मेरो डिजिटल नेपाल, मेरो परिकल्पना’ प्रतियोगिता सुरु भएको छ। माई सेकेन्ड टिचरको मुख्य सहकार्यमा लिभिङ विथ आइसिटीले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा असार ३० गतेसम्म विद्यार्थीले सहभागिता जनाउन सक्नेछन्।
विद्यार्थीले भविष्यको समृद्ध डिजिटल नेपालको परिकल्पना गर्दै निबन्ध, कविता, लेख वा एनिमेशनमध्ये कुनै एक तयार पारेर प्रतियोगितामा सहभागी हुन सक्नेछन्। असार ३० गतेसम्म प्राप्त विद्यार्थीका रचना (क्रिएसन) लाई छनौट गरी उत्कृष्ट ७ लाई रु. २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ।
आउँदो भदौ दोस्रो हप्ता विजेता घोषणा गरिने कार्यक्रममा एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले सहभागिता जनाउने आयोजकको अपेक्षा छ। सहभागी हुन इच्छुक विद्यार्थीले माई डिजिटल नेपाल डट ओआरजी वेबसाइटमा गएर आफ्नो क्रिएसन बुझाउन सक्नेछन्।
यस प्रतियोगितामा नेपाल सरकारले सन् २०१९ मा जारी गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा आधारित रहेर डिजिटलाइजेसनमा भइरहेको सरकारी वा निजी प्रयासहरूलाई आत्मसात गर्दै विद्यार्थीले भविष्यको कल्पना गर्नेछन्। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, क्यान महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (आइसिटी विकास समिति), प्याब्सनलगायतका संस्थाहरूको सहयोग रहेको छ। ‘भविष्य नेपालको’ नारासहित शिक्षा सिकाइलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयासमा रहेको माई सेकेन्ड टिचरले कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजन गरेको छ।
माई सेकेन्ड टिचर क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका आधारमा इनोभेट टेक नेपालले विकास गरेको लर्निङ प्लाटफर्म हो, जुन अहिले १८ भन्दा बढी देशमा प्रयोग भइरहेको छ।
मेरो डिजिटल नेपाल थिममा आइसिटी राइटिङ एन्ड डिजिटल क्रिएटिभिटी कम्पिटिशन नाम दिइएको यस कार्यक्रममा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञसहित ७ जनाको छनौट समिति रहेको छ। विभिन्न चरणमा हुने छनौट प्रक्रियालाई विधाअनुसार उत्कृष्टलाई पनि पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।
यस कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई डिजिटल नेपालको अभियानको बारेमा जानकारी हुनुका साथै प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने बानी बसाल्ने आयोजक समितका अध्यक्ष राजन लम्सालले बताए। यस प्रतियोगिताबाट आएका नयाँ पुस्ताको सोच र भावनालाई कदर गर्दै भोलिको समृद्ध डिजिटल नेपाल बनाउन सरकार र सरोकारवालालाई पनि ध्यानाकर्षण गराउने आयोजकको विश्वास रहेको छ।